विशेष – Samaj Khabar
चितवन- नेपाली कांग्रेस चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पार्वती शाह ठकुरीलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधिका रूपमा सामाजिक काम गर्दैगर्दा सामाजिक....पुरा पढ्नुहोस
विवेकशील साझाका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्रेको छ । प्रदेश ३ संयोजक समीक्षा बाँस्कोटा सहित ३० जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेको विवेकशील साझाका प्रवक्ता डा. सुर्यराज आचार्यले जानकारी दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय अगाडी शान्तीपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका बेला विवेकशील....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौँ, ७ फागुन: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनता सर्वोच्च हुने भएकाले सरकार उनीहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उनानसत्तरीऔँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जारीे विज्ञप्तिमा देश तथा विदेशमा रहेका सबै....पुरा पढ्नुहोस
युवा विद्यार्थीसंग गगनको गोप्य भेला, दिए कडा निर्देशन
समाजखबर,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय भएका गतिविधिबारे धारणा तय गर्न कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको नेतृत्वमा युवा विद्यार्थीहरुको भेला सम्पन्न भएको छ । मध्य बानेश्वरस्थित एक ब्यांक्वेटमा भएको भेलामा नेपाली कांग्रेसको ‘तेस्रो धार’ को दावी गर्ने समूहका विद्यार्थी नेताहरु....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा दोहो¥याइरहन्छन् । तर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख घुस लिएको प्रमाण प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ ४ महिना अगाडि नै पुगेको थियो । ४ महिनादेखि यस विषयमा....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका नेता विपिन अधिकारीले पार्टीभित्र कति दर्जाका कार्यकर्ता छन् भनी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन् । नेविसंघको आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रत्याशी रहेका अधिकारीले एउटै विचार र आस्था बोकेपनि पार्टीभित्र कार्यकर्तालाई विभेदपूर्ण व्यवहार हुने....पुरा पढ्नुहोस
नेक नीजिकरण गर्न पैसाको खोलो, घुस दिनेलाई के गर्ने ?
काठमाडौं । नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजसंग जोडिएको विषयमा घुस लिने अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत पनि भयो । उनले राजीनामा दिएपनि कसुरबारे छानबिन गरी कारवाही गर्न दवाव बढ्दै गएको छ । भनिन्छ,घुस लिनु र दिनु दुवै अपराध हो । यो प्रकरणमा घुस लिनेमा आयुक्त पाठक छन् जसको....पुरा पढ्नुहोस
‘वर्षदिनमै सरकार सर्वत्र असफल’
काठमाडौं । गठनको एक वर्षलाई सरकारले समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा व्याख्या गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कमजोरी ढाकछोप गर्न र सपना बाँड्नमै केन्द्रित रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष सकारात्मक नरहेको कांग्रेसले ठहर गरेको हो। कांग्रेसका....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । प्रणयको यो महिना फेब्रुवरी प्रेमी प्रेमिकाहरुप्रति समर्पित छ । यो महिना प्रेमी जोडीहले एकअर्कासँग माया र विभिन्न संकल्पहरु साट्छन् । एक अर्कालाई उपहारहरु दिएर खुशी राख्ने प्रयास गर्छन् । वास्तवमा प्रेम एउटा अनुभूति हो जसलाई शब्दमा बयान गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । विश्वप्रसिद्ध गुरु ओशोले....पुरा पढ्नुहोस
समृद्धिका गफमात्रै ! ६ महिनामा ६ सय २३ अर्बको व्यापार घाटा
काठमाडौं । व्यापार घाटा उच्चरुपमा बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आयात र निर्यातबीचको उच्च असन्तुलनका कारण व्यापार घाटा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो छ महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्था सम्वन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दे व्यापार घाटा बढेको जानकारी दिएको हो । राष्ट्र....पुरा पढ्नुहोस